Ithegi: ukubonakaliswa kwentengiso | Martech Zone
Ithegi: ulwaziso lwentengiso
Njalo kwithuba elithile, kubalulekile ukuphonononga isicwangciso sakho sokuthengisa. Ukuziphatha kwabathengi kuyatshintsha ngokuhamba kwexesha, izicwangciso zomntu okhuphisana naye ziyatshintsha ngokuhamba kwexesha, kunye namaqonga entengiso edijithali atshintsha ngokuhamba kwexesha. Intwasahlobo ilapha, kwaye ngoku lixesha elifanelekileyo lokuba iimveliso zihlaziye iinzame zabo zentengiso yedijithali. Ke, abathengisi bayiphelisa njani i-clutter kwisicwangciso sabo sentengiso? Kwi-infographic entsha ye-MDG, abafundi baya kufunda ukuba zeziphi iindlela ezindala kunye nezidiniweyo zedijithali zokuphosa oku
Intengiso yale mihla yintengiso yedijithali. Ububanzi bayo bubanzi obubanzi kunye namaqhinga angenayo, ukukhokelela kokukhokelela kunye neendlela zokukhulisa, kunye nokwenza iinkqubo zobomi bomthengi kunye neenkqubo zokukhuthaza. Ukuphumelela, abathengisi bafuna isisombululo sentengiso yedijithali esinobutyebi, eguqukayo, enokusebenzisana nezinye iinkqubo kunye nezixhobo, ezinomdla, ezilula ukuzisebenzisa, ezifanelekileyo nezonga imali. Ukongeza, iipesenti ezingama-90 zamashishini ehlabathini lonke zincinci; kananjalo namaqela abo okuthengisa. Nangona kunjalo, uninzi lwezisombululo zokuthengisa ezizenzekelayo azenzelwanga ukuhlangabezana neemfuno ze